Inona avy no tena ampiasain'ny micro excavator
Amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 21-10-16
Miaraka amin'ny fivoaran'ny The Times, ny fandrosoan'ny siansa sy ny haitao, ny haben'ny masinina soloina ny herin'ny asa dia mitombo, ary ny fampiharana ny milina fananganana kely dia mihalehibe hatrany. Ny fahaterahan'ny mpikaroka kely dia nanolo ny wh lehibe lehibe tany am-boalohany ...
Fomba fampiasa amin'ny menaka diesel ho an'ny kamiao forklift diesel ary fomba fanatsarana ny fahombiazan'ny asa
Diesel forklift no fitaovana fitahirizana fitaovana, manena be ny hamafin'ny asa ataon'ny olona, ​​manatsara ny fahombiazan'ny asa lojika sy ny kalitaon'ny serivisy, mampihena ny vidin'ny lozisialy, mitana andraikitra lehibe amin'ny asa fananganana lozisialy, mampiroborobo fatratra ...
Ahoana ny fanatsarana ny fahombiazan'ny forklift
Forklift dia fiara fitaterana, indrindra any amin'ny seranan-tsambo, ny gara, ny atrikasa famokarana, famoahana sy famoahana entana ary ny asa fitaterana, amin'ny ankapobeny mampiasa diesel, hery lehibe, fampisehoana azo antoka, miaraka amin'ny fanodikodinana tsara kokoa, amin'ny alàlan'ny. Androany dia tiako ny mampiditra ireo fomba hanatsarana ny vokatra ...
Ohatrinona ny mividy excavator kely
Amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 21-07-27
Ireo mpitrandraka kely novolavolaina, novolavolaina ary novokarin'ny mpikaroka kely dia manana tombony amin'ny vidiny ambany, kely, endrika tsara tarehy, automatique avo lenta, azo antoka ary azo itokisana ary ambany ny vidin'ny fampiasana. Ny orinasam-pananganana, ny fananganana injeniera monisipaly, ny fanaovan-tany ary ny asa an-tsaha ...
Ny vidin'ny milina fanodinana hydraulic feno karazana varotra miharo ala
Ny orinasanay dia mamokatra vokatra feno excavator kely, manomboka amin'ny 1 taonina ka hatramin'ny 4 taonina fandrakofana feno, miaraka amin'ny boky kely, lanja maivana, fanjifana solika ambany ary tombony maro, mety amin'ny fambolena, fambolena, zezika fanariana Orchard, asa tany kely, munic ...
Tombony 5 amin'ny forklift elektrika
Amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 21-07-07
1. Tsy manimba olona sy entana. Ho an'ny forklift elektrika dia tsy vitan'ny hoe mamoaka reraka izy ireo, fa mandeha tsara kokoa ihany koa. Izy io koa dia manana tombony amin'ny tabataba avo indrindra sy ny fihoaram-pahefana farany ambany. 2. Ny vidin'ny asa ambany ambany amin'ny fiakaran'ny vidin'ny solika iraisam-pirenena, ny vidin'ny herinaratra ...
Fa maninona no forklift mitondra kodiarana efatra no mifidy kodiarana?
Amin'ny maha fitaovana enta-mavesatra azy dia hisy fiatraikany mivantana amin'ny fahombiazan'ny asa ny kalitaon'ny kamiaon-kodiarana forklift efatra-kodiarana efatra, indrindra ny kodiarana eo ambany fanerena amin'ny tany. Inona no mahasamihafa ny kodiarana banga sy ny kodiarana mahazatra amin'ny kamio forklift? Iza no tsara kokoa? Efatra -...
Zava-dehibe ny fanaraha-maso alohan'ny forklift an'ny fiara mandroso efatra
Amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 21-07-01
Ny forklift amina kodiarana efatra dia karazana fiara enjeniera izay afaka mamonjy, mampidina, mitoby ary mamindra amin'ny tany mitsoaka sy tsy mitovy. Izy io dia azo omena fork na manolo fitaovana isan-karazany hanatsarana ny fahombiazan'ny asa. Inona no tokony hojerentsika alohan'ny hampiasana efatra-whee ...
Tombony sy vidiny avo lenta an'ny excavator kely
Amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 21-06-18
Ny taonina ankapobeny an'ny mini-excavator dia ambanin'ny 2 taonina, ny sakany dia ambanin'ny 1.3 metatra, kely ny vatana ary malefaka ny fihodinana. Fahombiazana avo, fanjifana angovo ambany, fampandehanana manan-tsaina no lalam-pampandrosoana lehibe. Ny excavator kely indrindra dia mifanaraka amin'ny elanelana miasa sy ny ...
Nanomboka tamin'ny volana janoary ka hatramin'ny aprily dia 48,271 kamiao forklift no naondrana, miakatra 2,47% isan-taona Araka ny antontan'isa momba ny sampana indostrialy sampana indostrialy China, forklift 69.719 no namidy tamin'ny aprily 2020, miaraka amin'ny fiakarana 12 915 isan-taona. , fitomboana 22,7% ...
Fa maninona no mini sale mini excavator eny an-tsena?
Amin'ny alàlan'ny admin amin'ny 21-05-06
Tamin'ny nifantohan'ny firenena hatrany tamin'ny fananganana faritra ambanivohitra vaovao, ankehitriny ny indostrian'ny mpitsangatsangana koa dia nanomboka niditra tamin'ny dingana mafana, olona maro no hahita fa misy mpitrandraka avo lenta ihany koa manana varotra avo, fa maninona no ...
Fa maninona no mihamaro ny tsena any ambanivohitra no mifidy ny mpanao «excavator» kely?
Amin'izao fotoana izao, miaraka amin'ny fampivoarana ny siansa sy ny teknolojia, ny fananganana fambolena dia niditra tamin'ny vanim-potoanan'ny asa mekanika. Malaza be ilay excavator micro. Andao hojerentsika izao ny antony mahatonga ny micro excavator malaza amin'ny fambolena eto an-tany. Voalohany indrindra, izahay hav ...